स्मार्ट फोन किन्नु अघि… | ''Knowledge Never Ends''
तपाइँले बोकिरहनु भएको फोन दुई वर्षअघि किन्नु भएको हो भने त्यो भन्दा राम्रो र ज्यादा सुविधा भएको फोन खरिद गर्नका लागि तपाइँ पछि परिसक्नुभयो। फिचर फोनलाई सेकेण्ड हृयाण्ड दाममा बेचेर स्मार्ट फोन किन्ने सोच बनाउनु तपाइँका लागि आवश्यक भइसकेको छ। स्मार्ट फोनमा रहेका स्मार्ट सुविधाले तपाइँको कनेक्टिभिटिलाई धेरै अगाडि लैजानेछ। त्यसैले एप्पलको आइफोन नै नसकेपनि एण्ड्रोइड अपरेटि सिस्टमको स्मार्ट फोन लिनु तपाइँका लागि अति जरुरी भइसकेको छ। साथीभाई देखी आफन्त सबैका हातमा आएको स्मार्टफोनले तपाइँको फिचर फोनलाई पक्कै पनि गिज्याइ रहेको होला। अथवा तपाइँ आफैलाई पनि इन्टरनेट र अन्य धेरै कम्प्युटिङ सुविधा भएको फोनको आवश्यकता महशुस भएको हुनसक्छ। तर त्यसो भन्दैमा एण्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम देखेर सबै स्मार्टफोन उस्तै त हुन् भन्ने विचार राख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाइँ गलत हुनुहुन्छ। एण्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम भएकै स्मार्टफोन किन्न लाग्नु भएको छ भने यी कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ।
एण्ड्रोइड हुँदैमा राम्रो हुँदैन
स्मार्ट फोन किन्न जानु अघि यो जानेर जानुस् कि आखिरमा एण्ड्रोइड हो के? वास्तवमा एण्ड्रोइड एउटा अपरेटिङ सिस्टम हो। जुन गुगलले मोबाइल उपकरणका लागि तयार पारेको हो। जसको नामाकरण खानेकुराको नामबाट गरिएको छ। सुरुमा गुगलले एण्ड्रोइड एक्लेयर बजारमा ल्याएको थियो। त्यसपछि क्रमश फ्रायो, जिन्जरब्रेड, हनिकम्ब, आइस्क्रिम स्याण्डवीच र जेलीबीनका रुपमा एण्ड्रोइडका फरक र नयाँ संस्करण ल्याएको छ। एण्ड्रोइड वास्तवमा मोबाइलमा रहेको हार्डवेयरमा रहेका सुविधा प्रयोग गर्न वा चलाउनका लागि सहयोग गर्ने सफ्टवेयर मात्र हो। यसले मोबाइलमा प्रयुक्त हार्डवेयरको गुणस्तरियतामा कुनै प्रभाव पार्दैन। न त यो अपरेटिङ सिस्टम हुँदैमा फोनको नेटवर्क क्वालिटी राम्रो हुन्छ न त वाइफाइको सिग्नल नै राम्रो समात्न सक्छ। यति चाहिँ हो कि एण्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्नका लागि आवश्यक न्यूनतम हार्डवेयर उक्त मोबाइलमा छन्। यतिखेर नेपालमा चिनियाँ एण्ड्रोइड फोन १० हजार भन्दा कम मुल्यमा उपलब्ध छन्। आखिरमा एण्ड्रोइड फोन नै त हो भनेर किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाइँले फोनमा कुराकानी गर्दा, वाइफाइ चलाउँदा गुणस्तरमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ।
ब्राण्डमा दिनुस् जोड
बजारमा पाँच हजार देखी माथि ७५ हजार सम्मका स्मार्टफोन उपलब्ध छन्। विभिन्न ब्राण्ड र लोगोका साथ उपलब्ध फोनहरुमध्ये धेरै एण्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टममा चल्ने छन्। एप्पलको आइफोनमा उसको आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम आइओएस छ भने माइक्रोसफ्टको विण्डोज ८ अपरेटिङ सिस्टम भएका फोन पनि बजारमा उपलब्ध छन्। यीनले दिने भनेको विभिन्न सेवा हो जसका लागि हार्डवेयर पनि मोबाइल सेटमा उपलब्ध भएको हुनुपर्छ। जसको गुणस्तरको एउटा विश्वसनिय आधार हो ब्राण्ड। त्यसैले स्मार्टफोन किन्नु अगाडि त्यसको उत्पादकलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। बजारमा एप्पल, एचटीसी, सामसु, एलजी, नोकिया, मोटोरोला, सोनी, कलर्स, कार्बन, माइक्रोम्याक्स लगायतका कम्पनी र ब्राण्डमा स्मार्टफोन उपलब्ध छन्। यस मध्ये
आफूले कुन किन्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्नु अघि साथीभाईले कुन कम्पनीको बोकेका छन्। त्यसको पनि याद राख्नुस्। जुन कम्पनीको वा ब्राण्डको मोबाइल बोक्नेहरु धेरै छन् त्यही कम्पनीको मोबाइल आफ्ना लागि छान्नुस्। किनभने लोकप्रिय र प्रख्यात ब्राण्डका उत्पादन असल नै हुन्छन्। त्यसमा देखिएका साना समस्यापनि ति कम्पनीका लागि गम्भिर असर पार्ने भएकाले चलेका ब्राण्डका उत्पादकले उत्पादनको गुणस्तरमा निक्कै ध्यान दिएका हुन्छन्।
मेमोरी कति छ?
स्मार्टफोन किन्दा त्यसमा रहेको मेमोरीको बारेमा जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ। मोबाइलमा रहेको रेण्डम एक्सेस मेमोरी अर्थात् रयाम तपाइँको मोबाइल अनुभवका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। किनभने यो स्मार्टफोनको महत्वपूर्ण हार्डवेयर हो। जसले मोबाइलमा रहेका फाइल तथा एप्सहरु चलाउँदा स्पिडमा खुल्ने बनाउँछ। रयाम नै त्यो हार्डवेयरहो जसले फोनका हरेक डाटा तथा एप्स चलाउँदा तिनलाई छिटो खुलाइ रहेको हुन्छ। अहिले डाइनामिक र्याम -डीरयाम)को रुपमा स्मार्ट फोनमा रयामको प्रयोग भइरहेको छ। यतिखेर बजारमा उपलब्ध फोनहरुमा ५१२ देखी दुई जीबी सम्मका रयाम रहेका छन्।
स्मार्टफोन मात्र होइन कुनै पनि कम्प्युटर उपकरण किन्दा ध्यान दिनुपर्ने सबै भन्दा महत्वको कुरा भनेको त्यसमा जडान भएको प्रोसेसर हो। प्रोसेसरले कुनै पनि उपकरणमा कुनै काम गर्न आदेश दिने गर्दछ। वास्तवमा यो नै स्मार्टफोनको दिमाग हो। यतिखेर स्मार्टफोनमा विभिन्न फरक नाम र क्षमताका प्रोसेसर जडान भएर आउने गरेका छन्। स्न्यापड्रयागन देखी हर्मिङबर्डस् अनि ओएमएपीआई यी सबै खालका प्रोसेसरका फरक फरक क्षमता र प्रकृति रहेका छन्। स्मार्टफोनको स्पिडमा समेत प्रोसेसरको भूमिका हुन्छ। तर यो मात्र स्मार्टफोनलाई छिटो गराउने उपकरण होइन।
क्यामेरा हरेक फोनमा उपलब्ध र अत्यावश्यक सुविधा हो। स्मार्टफोन किन्ने सबालमा पनि यो सुविधा जति राम्रो छ त्यो फोन त्यति नै राम्रो हुन्छ। फोनमा रहेको क्यामेराको क्षमता पनि त्यो फोनलाई जाँच्ने कसी मध्येको एक हो। क्यामेराको कारण स्मार्टफोन वास्तवमा स्मार्ट भएको हो। यसमा रहेको क्यामेराबाट तस्विर तथा भिडियो खिचेर जुनकुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा बाँढ्न सकिन्छ। अहिले नै बजारमा १२ मेगापिक्सल सम्मका क्यामेरा रहेका स्मार्टफोन आइसकेका छन्। त्यसो त नोकियाले आफ्नो प्योर भ्यू ८०८ फोनलाई ४२ मेगापिक्सलको क्यामेराले लेस बनाइसकेको छ। मोबाइल फोन किन्नु अगाडि त्यसको क्यामेराको क्षमताबारे बुझ्न नबिर्सनु होला।
मोबाइल किन्दा एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यसको स्क्रीन पनि हो। त्यसैले मोबाइल किन्दा यो कुरा जानेर मात्र किन्नुहोस् कि त्यसमा रहेको स्क्रीनको क्वालिटी के हो। र त्यसको विशेषता के हो। घाममा मोबाइलको स्क्रीन राम्ररी देखिन्छ देखिन्न। फोनलाई विभिन्न कोणबाट हेर्दा त्यसको स्क्रीनमा डिस्प्ले भइरहेको कुराहरु देखिन्छ देखिन्न त्यो हेर्न नबिर्सनुस्। अहिले बजारमा एमोएलइडी, सुपर एलसीडी, क्यूएचडी लगायतका स्क्रीन भएका स्मार्टफोन उपलब्ध छन्। तीनका विशेषता बुझेर मात्र फोन किन्ने निर्णय गर्नु बुद्धिमानी र्ठहर्छ।
स्मार्टफोन किन्नु अघि जान्नु पर्ने अर्को कुरा हो त्यसमा रहेको स्टोरेज क्षमता। अर्थात् इन्टर्नल मेमोरी। अहिले बजारमा उपलब्ध सबै जसो स्मार्टफोनको स्टोरेज क्षमतालाई बढाएर ६४ जीबी सम्म बनाउन सकिन्छ। तर तपाइँले किन्न लागेको फोनमा कति जीबी सम्मको कार्ड राख्न सकिन्छ। वा त्यसले कति ६४ जीबीको कार्ड सपोर्ट गर्छ या गर्दैन। या ३२ जीबी मात्र गर्छ। त्यसको जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ। अहिले इन्टर्नल मेमोरी चार जीबी देखी आठ जीबी सम्म भएका फोन बजारमा उपलब्ध छन्। तर बढी इन्टर्नल मेमोरी भएको फोनका लागि भने अल्लि धेरै मुल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ।
लोडसेडिङका कारण दैनिक लामो समय बत्ति गइरहने मुलुक भएकाले पनि यसमा बढी चनाखो हुनुपर्छ स्मार्टफोन किन्दा। किनभने मोबाइल फोनको सबै भन्दा महत्वपूर्ण प्रयोगको आधार नै यसको ब्याट्री हो त्यसैले फोन छनौट गर्दा त्यसमा रहेको ब्याट्रीको क्षमताबारे जानकारी राख्नुहोस्। स्मार्टफोनमा रहेका विभिन्न सुविधाका कारण त्यसले ब्याट्री खपत पनि धेरै गर्छ। लामो समय सम्म चार्ज गर्न नभ्याउँदा त्यसले तपाइँको फोनको आवश्यकतालाई ब्याकअप गर्न सक्छ सक्दैन त्यसबारेमा किन्नु भन्दा अगाडि नै सोच्नुहोस्।
माथिका बुँदाहरुमा उल्लेख भएका विषयमा जानकारी लिएर मात्र स्मार्ट फोन किन्नु भयो भने तपाइँको स्मार्ट फोनमा भएको लगानीले सही प्रतिफल दिन्छ।
Posted by neupanekeshav in Mobile
Tagged: स्मार्ट फोन किन्नु अघि…
← उच्च रक्तचापबाट छुटकारा पाउने एक दर्जन उपाय
5 INGREDIENT FAT FLUSH WATER →